Puntland oo ciidamo badan geysay aaga Degmada Qandala oo Daacish ay ku sugan yihiin | Baydhabo Online
Puntland oo ciidamo badan geysay aaga Degmada Qandala oo Daacish ay ku sugan yihiin
Ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa Puntland iyo Maleeshiyo beeleed, ayaa shalay oo Isniin aheyd ka dhaqaaqay Magaalada Boosaaso ee Gobolka Bari, kuwaasi oo u jiheystay dhanka Degmada Qandala oo fariisin Millateri ay ku leeyihiin Xoogaga Daacish.
Wararka ayaa sheegaya ciidamadan ujeedkooda inuu yahay guluf dagaal inay ku qaadaan Degmada Qandala oo muddo bil iyo bar ay ku sugan yihiin Xoogag Daacish ka tirsan oo dhanka Buuraha galgala ka soo baxay.
Guddoomiyaha Degmada Qandala Jaamac Maxamed Khurshe ayaa u sheegay Reuters in ciidamadoodu ay ka baxeen Boosaso, qorshuhuna yahay in dib loo qabto Qandala.
Jaamac ayaa sheegay ciidamada Puntland inay caawinayaan ciidan maleeshiyo beeleed ah oo ka soo jeeda Qoyska uu ka dhashay Hogaamiyaha Daacishta Somaliya Sheekh C/qaadir Muumin.
Ciidamada Puntland iyo kuwa maleeshiyaadka ayaa xalay ku hooyday meel ku dhaw Degmada Qandala ee Gobolka Bari, waxayna ka fekerayaan ciidamada sidii ay ku geli lahaayeen Magaaladan iyadoo la xakameynaayo Khasaaraha suuragalka ay tahay ciidamada dagaalka inuu ka soo gaaro.
Daacishta Qandala ku sugan ayaa la sheegay maalmihii la soo dhaafay inay wadeen dhaq-dhaqaaq ay ku doonayaan inay isugu fidiyaan deegaano ka tirsan Gobolka Bari.
Qorshaha ay wadaan ciidamada Puntland iyo kuwa Maleeshiyaadka ah ayaa ah kii ugu dambeeyay ee ay ku doonayaan inay ku qabsadaan Magaaladan.